नेपाल आज | मोबाइलसमेत यतै छाडेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले रोममा के गर्दैछन् ?
कभर स्टोरी ताजा खबर समाचार
मोबाइलसमेत यतै छाडेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले रोममा के गर्दैछन् ?
अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छः रोम वाज नट विल्ट इन अ डे अर्थात रोम एकै दिनमा बनेको होइन । ज्ञानेन्द्रका नातिनातिनाले विद्यालयमा यही पढे । सभ्यताको जननी मानिने इटलीको रोम शहरका बारेमा उनीहरुले विद्यालयमा थुप्रै कुरा सुने । सम्राट जुलियस सिजरका कथा पढे । घरमा आएर उनीहरुले आफ्ना हजुरबुबा ज्ञानेन्द्रलाई सोधे, रोम कस्तो छ ?
ज्ञानेन्द्रले सपरिवार रोम घुम्न जाने योजना बनाए । रोमले नातिनातिनालाई धेरै कुरा सिकाउने उनले निष्कर्ष निकाले । बर्षौ लगाएर कुदिएका कलाकृति देखि सुन्दर संरचनाले धैर्यता र निरन्तरतको पाठ सिकाउने भन्दै उनले नातिनातिनालाई रोम लैजाने वाचा गरे । छोरी प्रेरणालाई ज्वाइ र छोरा सहित रोम जाने निम्ता दिए ।
यसरी श्रीमती कोमल, बुहारी हिमानी, घरका २ नातिनी र एक नाति तथा छोरीपट्टिको नाति र ज्वांइका साथ उनी पारिवारिक भ्रमणमा रोम हानिए । उनका साथमा निजी सचिव सागर तिमिल्सेना र डिएसपी एकजना पनि छन् । सम्र्पकमा छैनन नेपालस्थित सचिवलायसँग पूर्वराजाका सहयोगी डाक्टर फणि पाठकका अनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह नितान्त पारिवारिक भ्रमणमा रोम पुगेका हुन् ।
अघिपछि विदेश जाँदा पूर्वराजाले नेपालकै फोन बोक्थे र रोमिङ कल गराउंथे । अहिले फोन यतै छाडेका छन् । गएको दिनबाट नेपालस्थित सचिवालयसँग कुनै सम्र्पकपनि गरेका छैनन् । पूर्वयुवराज पारस र मुमबडामहारानी रत्न नेपालमै छोरीज्वांइसहित रोम पुगेका पूर्व राजदम्पत्तिले एकमात्र छोरा पारसलाई भने सँगै लगेका छैनन् । घरभन्दा बाहिर बस्दै आएका पारस नेपालमै छन् ।
पायल्स पीडित रत्नपनि नेपालमै छिन् । बृद्धाअवस्था र रोगका कारण रत्न रोम जान सक्ने अवस्था नरहेको बताइएको छ । २ हप्ताका लागि शुक्रबार रोम हानिएका पूर्वराजा अझैं एक हप्ता उतै रहनेछन् ।
राजनीतिक उतारचढाव हुँदाको भ्रमण
शुक्रबार पूर्वराजा रोमतर्फ लाग्दै गर्दा नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुँदै थियो । राजनीतिक अवस्था उतारचढावपूर्ण रहदारहदैपनि पूर्वराजा बिदेश हानिएका थिए । बाहिर निजी भनिएपनि भित्र कुनै खेल त छैन भनि हामीले सहयोगी डाक्टर फणि पाठकलाई सोधेका थियौं । उनले नातिनातिनाको बर्खे बिदा अनुसार भ्रमण पहिले नै तय भएकाले अहिलेको राजनीतिक उतारचढावसँग कुनै सम्बन्ध नभएको प्रष्टिकरण दिए । रोममार्फत नातिनातिनालाई पाठ सिकाउने ईच्छा पूर्वराजदम्पत्तिलाई छोरा पारसका कारण गहिरो चोट परेको बताइन्छ ।
पूर्वयुवराज आफ्नो काबुभन्दा बाहिर गएपछि दुःखी बनेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले नातिनातिनाको विशेष ख्याल राख्ने गरेका छन् । नाति हृदयन्त्रलाई सुसस्कृत बनाउने र जनताको मन जित्ने उनको लक्ष्य छ । आफ्नो पालामा गुमेको राजतन्त्र हृदयन्त्रमार्फत फर्कन सक्ने उनको विश्वास छ । सोका लागि उनले हृदयन्त्रलाई राजकीय शिक्षा दिने प्रयास गरिरहेका छन् ।
आफैंले विभिन्न ठाऊ घुमाउन लगिरहेका छन् । बाल्यकालमा प्रयाप्त समय दिन नसकेका कारण पारसको मनोविज्ञान अर्कै बनेको हुनसक्ने पूर्वराजाको आंकलन रहेको बताइन्छ । उनले हृदयन्द्रलाई गलत संगतमा पर्न नदिन नियमितरुपमा नैतिक शिक्षा दिने गरेको बताइन्छ । कुनैबेला विशाल साम्राज्य रहेको रोमको भ्रमण गराएर उनले राजतन्त्रको उत्थान र पतन इतिहासमा हुने गरेको सन्देशपनि दिन चाहेका छन् । भावि पुस्ताले आफ्ना कारणले राजतन्त्र गुमेको र सत्ता खोसिएको भन्ने दोष आफुलाई नदियोस् भन्नेमा पूर्वराजा चिन्तित रहेको बताइन्छ ।
पूर्वराजदम्पत्तिका नातिनातिनाको बढ्दो सक्रियता
दरबार हत्याकाण्ड भएको दिनको सन्दर्भमा पूर्वराजपरिवारका नातिनातिना एकाएक नारायणहिटी दरबारको मूलद्वार अगाडि जम्मा भए । उनीहरुले श्रद्धान्जली व्यक्त गरे । श्रीमान् गम्भीर बोलको गीत गाए र गए । यो सानो घटनामा गम्भीर अर्थ लुकेको बताइन्छ । छापामार शैलीको सो कार्यक्रमलाई मिडियाबाट अलग राख्न खोजिएको थियो । नेपाल आजको टिम संयोगले त्यहां पुगेको थियो ।
श्रद्धान्जली कार्यक्रमको तरिका हेर्दा धेरै तयारीमार्फत गरिएको देखिन्थ्यो । केही मकुण्डोधारीको नाराजुलुशपछि नातिनातिना टुप्लुक्क आइपुगेका थिए । आउनेमा कोको थिए भन्ने सम्म गोप्य राखिएको थियो । कार्यक्रम सकिइसकेपछि मात्रै स्वर्गीय राजदम्पत्ति विरेन्द्र र ऐश्वर्याका नातिनीहरुपनि आएको सुँइको स्थानीय र यात्रुले पाएका थिए । सो श्रद्धान्जली कार्यक्रम नारायणहिटी अगाडि नै गराएर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो भावि पुस्ता राजनीतिक घटनाक्रम र नारायणहिटीका बारेमा सेचत रहेको सन्देश दिएको बताइन्छ ।
नारायणहिटीभित्र रहेको महेन्द्र मन्जिलमा बस्दै आएकी रत्नलाई भेट्न पनाति पनातिनाहरु आइरहन्छन् । उनीहरुले त्यहाँबाट आफ्नो पुख्र्यौली दरबार चिहाउने गरेको र त्यहाँका बारेमा सोध्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका नाति हृदयन्त्रमा भावुक स्वभाव रहेको र सानै देखि उनले देशको इतिहास एंव राजनीतिमा चासो राख्ने गरेको उनका एक शिक्षकले जानकारी दिएका छन् ।
Gyandra Shah Himani Hsah Hridayandar Shah king of nepal Nepali King